Asa tanana - Asa tanana | Asa-tanana (Pejy 6)
Anjely kely Noely miaraka amina boaty lalao
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba ahafahanao manao anjely kely Krismasy mahafinaritra amin'ny hazo na amin'ny sehatra nahaterahana.
Hazo krismasy hazo kely
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanamboarana hazo krismasy kanto sy minimalista mba handravahana ny trano amin'ny toetr'andro Krismasy.
Baolina krismasy tototry ny baoty
Lahatsoratra natokana ho an'ny haingo Krismasy. Hevitra handravahana ny hazo krismasy miaraka amina baolina fitaratra feno aromaso sy tsipika.
Snowflake handravahana ny varavarankely
Lahatsoratra momba ny haingo Krismasy. Amin'ity DIY ity dia manolotra hevitra anao izahay hanamboatra modely anao manokana handravahana ny varavarankely amin'ny ranonorana.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fananganana vavahady tsara tarehy Betlehema miaraka amina fitaovana voaverina toy ny boaty kiraro. Asa tanana mety amin'ny ankizy.
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana kalandrie Advent tena manokana. Namboarina tamin'ny boaty fanodinam-bokatra kely sy ny horohorontany ho an'ny ankizy.
Haingo amin'ny Noely miaraka amin'ny tanimanga
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana haingon-trano Krismasy mahafinaritra amin'ny tanimanga. Saripika mahafatifaty izay ahafahan'ny ankizy manome tanana antsika.
Hazo krismasy misy solaitrabe
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny asa tanana tsotra sy haingana hanamboarana hazo krismasy baoritra sy handravahana azy ho toy ny solaitrabe ho an'ny ankizy.
Noely miaraka amin'ny cookies
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fomba iray hanomezana cookies amin'ny fomba Krismasy amin'ny fomba manokana izahay. Araka izany, hiaina an-tsehatra lavitra kokoa ny ankizy.
Haingo hazo krismasy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana haingon-trano tsara tarehy ho an'ny hazo krismasy. Hazo tena tsotra misy fitaovana fanodinana.
Kavina vita amin'ny plastika majika
Lahatsoratra natokana ho an'ny fanazavana sy ny fampiasana plastika majika, fitaovana iray nanjary nalaza nandritra ny fitopololahy.
DIY: poketra ao an-trano
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana kitapom-batsy vita an-trano tanteraka vita amin'ny leatherette. Fanomezana tena mety amin'ny tanana amin'ireo datin'ny Noely ireo.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana volom-panala vita an-trano tsara tarehy noho ny firavaka Krismasy kely sy siny fitaratra. Fanomezana manokana.
Ampianarina anao izahay anio ny fomba hanaovana snowman mahafinaritra miaraka amin'ny lovia plastika sy fitaovana fanodinana isan-karazany mba hanomezana izany trano izany Krismasy.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana pompom-volonondry tsotra mba hampiroboroboana ny fahaizan'ny môtô an'ny ankizy. Asa tanana mahafinaritra ihany koa.
Baolina Krismasy misy flange fandrahoan-tsakafo
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanaovana baolina Krismasy tena haingo sy kanto hitafy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ho toy ny firavaka Krismasy.
Hazo krismasy misy kesika kesika sy siny lamba
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana hazo krismasy tsara tarehy miaraka amin'ny pinecones sy tsapa. Fomba kely handravahana zorony amin'ity haingon-trano ity.
Boky kely misy ravina taratasy
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana boky kely misy takelaka taratasy ho toy ny rojo vy fanangonana na kely indrindra. Tena fialamboly tsy manam-paharoa ho an'ny tenany.
Siny fitaratra voaravaka kasety washi
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba hanararaotana ireo siny fitaratra ho an'ny vokatra sakafo amin'ny alàlan'ny fandokoana azy ireo amin'ny washi tape ary fanaovana izay mahafinaritra kokoa.
Hazo krismasy misy kesika kesika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana hazo krismasy mahafinaritra misy kesika kesika. Entana haingon-trano ho an'ireo fialantsasatra manokana ireo.
Mitsitsia borosy lamba
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanararaotanay ny pataloha pajama tonta hanaovana lamba tsara tarehy hitahirizana ny borosinay.
Winder tariby plastika ho an'ny headphone
Fampianarana momba ny fomba fanamboarana kofehy tariby misy fitaovana namboarina mba tsy hialantsika lalandava ny headphones rehefa te hampiasa azy ireo isika.
Manaova marika miaraka amin'ny famafana pensilihazo
Fampianarana momba ny fomba fanodinana ary hanome fiainana vaovao ny fingotra amin'ny faran'ny pensilihazo mba hanaovana marika sy hamehezana ny karazan-taratasy rehetra.
Ampianaro ny zanakao hanjaitra
Amin'ity atrikasa famolavolana ity dia azonao atao ny mampianatra ny zanakao teknika samihafa hanatsara ny fahaizany moto. Ankoatr'izay dia hianatra manjaitra ho an'ny ho avy izy ireo.
Binocular an'ny ankizy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana masolavitra manaitra ho an'ny ankizy vita amin'ny baoritra ary voaravaka kasety washi.
Ny fametahana dia asa tanana tian'olom-bitsy matetika, noho izany dia amboarintsika indray ny horonan-kasety adhesive mba hanaovana kodiarana fitomboka.
Harona misy baoritra baoritra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fomba tena kanto hametrahana ireo voankazo izahay, miaraka amin'ny takelaka baoritra fotsy vitsivitsy fotsiny hanaovana harona vitsivitsy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra anao ny kaopy mahafatifaty misy horonana taratasy izahay mba hanaovana dite mahafinaritra ho an'ny olon-drehetra hilalaovan'ny fianakaviana.
Puzzle miaraka amin'ny tehina gilasy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba ahafahan'ny ankizy mifalifaly amin'ny fanaovana ankamantatra kely miaraka amina gilasy, hevitra hafa momba ny lalao.
Handravaka vilany misy loko
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fomba tsara sy tany am-boalohany handravahana vilany kely misy loko. Fikitika manokana ho an'ny zavamaniry.
Sotro misy elatra
Indraindray dia sarotra ny mamahana ankizy, koa asehonay anao ity fiaramanidina sotro ity mba hahafahan'izy ireo miala voly mandritra ny sakafo. Fomba mahafinaritra tsotra.
Kavina misy bokotra
Ny peratra dia singa haingon-trano ho an'ny tanan'ny vehivavy rehetra sy ny lehilahy sasany, noho izany dia ampianarinay anao anio ny fomba fanaovana izay tena mora amin'ny bokotra.
Haingo amin'ny lakolosy tanimanga
Eo am-baravarana voalohany dia mahazatra ny mametraka lakolosy sasany hahafantarana izay miditra ao an-trano, asehonay anao anio ny fomba fanaovana azy ireo amin'ny fitaovana azo ampiasaina indray.
Bowl ho an'ny peratra mariazy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao lovia iray na lovia tany am-boalohany hahafahanao mitondra ny peratra ampakarina ho an'ny alitara fa tsy ilay ondana voaravaka mahazatra.
Voatavo mampahatahotra miaraka amin'ny tangerine
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manampy anao hanova ny fisehoan'ny tangerines mba hahatonga ny voatavo mini mampatahotra ho an'ny Halloween, singa haingo tsy manam-paharoa.
Handravaka amin'ny zavatra vita amin'ny volon'ondry
Lahatsoratra momba ny fomba fanamboarana zavatra misy volon'ondry sy lakaoly. Etsy ambany no ahitanao ny fomba fanaovana vazy kely.
Coaster vita amin'ny tile
Asa tanana haingana sy mora hanamboarana morontsiraka amin'ny taila fanodinana.
Fehiloha kofehy boho
Lahatsoratra momba ny fomba fanamboarana fehin-tànana boho amin'ny kofehy stitch, kofehy metaly namboarina, vakana vitsivitsy sy lakaoly.
Manamboara penina misy CD
Tutorial momba ny fomba fanamboarana penina amin'ny alàlan'ny CD taloha. Hampiasa horonam-peo izahay mba hahatonga ny fahatapahan'ny CD ho tonga lafatra ary hapetakay ao anaty penina
Matoatoa Halloween amin'ny gauze
Ny matoatoa dia singa Halloween iray tena mahazatra, noho izany dia ataontsika toy ny asa-tanana vita amin'ny fehiloha vita amin'ny bandy, ka homentsika azy io be dia be.
Haingo ho an'ny varavarana fidirana ho an'ny Halloween
Ny varavarana fidirana dia toerana tsara foana hanaovana ny fiatraikany voalohany amin'ny Halloween, noho izany dia manolotra asa tanana mampatahotra anao indrindra izahay anio.
Vilany voatavo ho an'ny fitsaboana Halloween
Amin'ny Halloween dia mila fitoeran-javatra foana ianao ahafahanao mametraka ny vatomamy rehetra avy amin'ny mpifanila vodirindrina aminao, noho izany dia manolotra an'ity voatavo vita amin'ny tavoahangy gel ity izahay.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba handravahana ireo solomaso plastika na kaopy mahazatra, mba hanomezana azy io hikasika kokoa, tsara ho an'ny Halloween.
Kitapo vatomamy ho an'ny Halloween
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanaovana kitapo tsy ampoizina miaraka amin'ny vatomamy ho an'ny fety Halloween, fomba iray tany am-boalohany hanaterana azy ireo amin'ny ankizy.
Takelaka voaravaka ho an'ny Halloween
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanararaotana ny sakafon'ny antoko Halloween mba hananan'izy ireo fifanarahana bebe kokoa amin'ity fialantsasatra ity.
Ghost ho an'ny Halloween
Ny antoko Halloween dia miha-manakaiky isan'andro ka amin'ny haingon-trano dia tsy afaka manadino matoatoa mahafinaritra ianao, anio dia mampianatra anao ny fomba hanaovana izany izahay.
Fetin'ny voatavo Halloween misy horonan-taratasy
Voatavo no sakafo manan-danja indrindra amin'ny Halloween, fa tsy ny fihinanana azy ireo fa ny fanaovana haingon-trano, anio dia ampianarinay anao ny fomba fanaovana azy ireo amin'ny taratasy iray.
Ramanavy miaraka amina horonan-taratasy fidiovana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny ramanavy mahatsikaiky vita tamin'ny horonan-taratasy fidiovana mba hampitahorana ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana amin'ny alin'ny Halloween.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana tsipìka confetti kely mahafatifaty. Amin'izany fomba izany dia hanana haingo manokana ho an'ny fanomezana akaiky anao ianao.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny lalao mahafinaritra ahafahanay manamboatra tavoahangy plastika fanodinana mba hanaovana bowling sumo mampihomehy ho an'ny ankizy.
Cobwebs misy takelaka sy loko, Halloween manokana
Efa akaiky ny Halloween ary azonao antoka fa manomboka mitady asa tanana hatao amin'ny ankizy ianao. Aseho anao iray tena mampihomehy izahay.
Isa matematika tany am-boalohany ho an'ny ankizy
Ny matematika dia tena zava-dehibe amin'ny fianaran'ny ankizy, ka anio dia asehonay anao ny fomba fanaovana lalao misy isa matematika amin'ny vato.
Rojo hazo nolokoina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra anao rojo tsara tarehy vita amin'ny fitaovana fanodinana. Miaraka amin'ny baolina hazo sasany dia afaka manao fitaovana fampiasa haingon-trano tsara isika.
Fomba fanaovana kavina hippie style
Lahatsoratra momba ny fomba fanaovana kavina amin'ny hippie misy volom-borona sy vakana. Ao amin'ny lahatsoratra dia afaka mahita maodely roa samy hafa isika.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana saribakoly tsara tarehy ho an'ny ankizy kely ao an-trano miaraka amina baoritra kely manodidina ny trano.
Jiro vita amin'ny tavoahangy plastika namboarina
Tutorial (DIY) momba ny fomba fanamboarana jiro amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy plastika sy fampiasana loko vita amin'ny tsifotra, fitoeran-jiro ary sarom-pisaka cookie.
Atody misy hafatra tsy ampoizina
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba handravahana atody ary hamela hafatra ao anatiny ho an'ny fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana na fety ankizy hafa.
DIY: fitoeran'ny napkin misy fitoeram-plastika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba hanararaotana ireo fitoeran-plastika hanaovana zavatra ilaina miaraka aminy, toy ny mpihinana napkin mahafinaritra.
DIY: kitapo hippy
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanamboarana kitapo misy fomba sy famoronana hippy miaraka amina fitaovana azo averina toy ny pataloha hippy malalaka.
DIY: Haingo amin'ny boaty
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba maoderina sy tena tsara hanararaotana boaty kiraro hanaovana singa haingon-trano tena tsara tarehy.
DIY: Handravaka tavoahangy amin'ny lamba fanasan-damba
DIY izay mampiseho amintsika hevitra hamerenana ireo tavoahangy fitaratra, hanome azy ireo fiasa vaovao, ary handravaka azy ireo amin'ny lamba fanasan-damba.
DIY: 3 misesy ho an'ny ankizy
Zava-dehibe amin'ny fianaran'ny ankizy ny lalao any amin'ny birao, ka mampianatra anao izahay anio mba hanao 3-in-a-row izay tsy tsapa ho an'ny ankizy kely.
DIY: mpitazona napkin misy horonan-taratasy fidiovana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana mpanan-napkin kanto miaraka amina taratasy kely iray. Noho izany, dia handravaka ny latabatrao amin'ny fitaovana voaodina.
DIY: brooch bear panda
Ny saribakoly biby vita amin'ny fahatsapana dia tsara ho an'ny mpampianatra akanin-jaza, ka anio dia asehoko anao ny fomba fanaovana brooch panda bear.
DIY: tavoahangy mihazona ny labozia
DIY amin'ny fomba fanamboarana labozia iray mampiasa tariby aluminium sy tavoahangy. Ho fanampin'izany, mora be ny manavaka ny zavatra tiantsika amin'ny loko vitsivitsy
DIY: karatra tsy ampoizina ho an'ny kitapo dite
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana karatra tsara tarehy misy hafatra tsy ampoizina ho an'ny kitapo dite. Araka izany, hanomboka ny maraina amin'ny fifaliana isika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fomba tsara hampiasana indray ny sary taloha izahay mba hahafahana mampiseho azy ireo amin'ny fomba manokana amin'ny lafiny rehetra amin'ny trano.
Boaty hazo amin'ny stitch hazo fijaliana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia mampiseho sary hosodoko feno hafaliana natao tamina zana-kazo kely sy kofehy neon namboarina tamin'ny stitch hazo fijaliana. Haingo mihoampampana.
Harona bisikileta ho an'ny ankizy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana harona baoritra mahafinaritra ho an'ny bisikileta ho an'ny ankizy, mba hahafahan'izy ireo mitondra ny entany mankany amin'ny valan-javaboary.
Taratasy baoritra nalahatra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba handravahana ny efitranon'ny zaza misy litera baoritra tsotra nopetahany tapa-damba.
Coasters misy dowels hazo
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra anao asa tanana tena kanto sy miloko izahay. Ny morontsiraka sasany misy vatofisaka hazo handravahana ny latabatrao tamin'ny voalohany.
Boaty misy taratasy mivalona
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana boaty tsara sy tsotra amin'ny taratasy mivalona. Araka izany, hanana toerana hitahiry ireo firavaka kelintsika isika.
Tsipoapoaka tsapa tsotra
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra anao ny sasany kapaoty vita am-boalohany vita amin'ny tanana amin'ny lamba tsapa. Mahazo aina sy mafana amin'ity fararano-ririnina ity.
Amboary ny zipo lava dia omeo endrika vaovao izy
Lahatsoratra momba ny fomba hanapahana zipo lava amin'ny fomba vaovao, avela ho fohy ny tapany aloha ary ny famaritana ny tapany aoriana misy lamasinina.
Ahoana no manapaka ny T-shirt zazalahy
DIY amin'ny fomba fanaovana t-shirt amoron-dranomasina an'ny zazalahy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianarantsika ny fomba fanodinana t-shirt ary hanome azy fampiasana vaovao rehefa antitra
DIY: broch Arale vita amin'ny fimo (Dr. Slump)
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanaovana brooch ny toetra Arale avy amin'ny andian-tsarimihetsika DR. Slump noforonina tamin'ny taona 80 an'i Akira Toriyama.
Lalao jono ho an'ny ankizy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny jono mahafinaritra lalao izay hankafizin'ny ankizy indrindra. Miaraka amin'ny andriamby kely vitsivitsy sy tsapa.
Pensilihazo misy sakana hazo
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana pensilihazo tena izy sy tsy manam-paharoa miaraka amina bara hazo tsotra. Araka izany, ho voatahiry tsara ireo pensilihazo.
Amboary ny pensilihazoo
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanararaotana betsaka ny pensilihazo mba hanomezana azy ireo fanavaozana mety tsara mba hampiasa azy ireo indray ary hahatonga azy ireo ho original.
Maracas ho an'ny ankizy
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ianao ny fomba hanaovana maracas mahafinaritra sy manan-tsaina ho an'ny ankizy, satria tian'izy ireo ny mitabataba na amin'inona na amin'inona.
Tranga misy peta-kofehy tanana, miverina mianatra!
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay tranga mahafinaritra sy mahafinaritra ho an'ny olona manokana ianao, natao peta-kofehy ny tanana mba hanombohan'ny ankizy am-pianarana.
Famantaranandro miaraka amina lego
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanamboarana famantaranandro mahafinaritra miaraka amin'ireo sanganasa Lego, asa tanana hizara amin'ireo ankizy kely ao an-trano.
Kitapo hiverina any an-tsekoly
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanamboarana kitapo tsara tarehy haingana sy mora ho an'ireo ankizy kely any an-tsekoly hisakafo maraina.
DIY: Kilalao maotera ho an'ny saka
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao kilalao mahafinaritra hafa ho an'ny saka. Miaraka amin'izany ianao dia tsy hijanona intsony ary hankasitrahana ny fahaizanao moto sy ny fihetsiky ny vatanao.
DIY: Paingotra manaikitra saka
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana lahatsoratra mikorisa mahaliana ho an'ny saka. Fitaovana tena ilaina amin'ny trano misy biby fiompy maranitra fantsika.
DIY: kilalao mozika ho an'ny saka
Amin'ity lahatsoratra ity dia mampianatra anao ny fomba fanaovana kilalao tsotra ho an'ny saka izahay, amin'ity fomba ity dia hifalifaly amin'ny zavatra vita amin'ny tanantsika ihany izy ireo.
DIY: Maracas misy kapsily kafe
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana kilalao famporisihana ny zaza ho an'ny zaza. Maracas vitsivitsy tsy misy afa-tsy kapsily kafe azo ampiasaina ihany.
DIY: domino misy vato
Amin'ity lahatsoratra ity dia manao domino mahafinaritra ho an'ny ankizy vita amin'ny vato avy amin'ny ranomasina izahay. Ampianarintsika azy ireo fa ny natiora dia mamela antsika hanao kilalao miaraka aminy.
DIY: Ball Ball
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana kilalao manokana ho an'ny biby fiompinao. Volon'ondry iray handroahana sy hilalao hanenjehana azy manodidina ny trano.
DIY: Manaingo boaty baoritra
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba handravahana boaty baoritra sasany hitahirizana ireo zavatra kely na firavaka ananantsika ao an-trano ireo ary tsy mandry tsy lavitra.
DIY: Fomba fanamboarana vera amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy iray
DIY amin'ny fomba fanamboarana vera amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy fitaratra. Mora, haingana ary tany am-boalohany, amin'ity DIY ity dia hahazo solomaso vitsivitsy hametraka fironana isika.
DIY: ampanjifaiko ny sarimihetsika misy anao
Amin'ity lahatsoratra ity dia manakaiky ny fiverenana any amin'ny sekoly akaiky antsika izahay ary manao asa-tanana tsotra amin'ny fanaingoana ireo clip mahazatra hitazonana ireo folio.
Trano haingo miaraka amin'ny gomets
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba handravahana lovia fotsy tsotra tsotra miaraka amina sticker kely fotsiny. Hevitra tena niandohana sy sahisahy.
Tsaoka vita an-trano
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana sakamalao tsy manam-paharoa ao an-trano mba hahafahan'ny ankizy manana fitaovana hosodoko amin'ny arabe.
Vatomamy misy kaopy vera
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana boaty vatomamy tsara tarehy sy kanto miaraka amin'ny goblet fitaratra tsotra izay vaky eo ambany.
Voninkazo misy tavoahangy plastika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana voninkazo tsara tarehy amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy plastika ihany. Handravaka ny tranonao amin'ity karazana teknika mora ity.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana piozila pepa kisoa mahafinaritra amin'ny hazo popsicle vitsivitsy fotsiny. Amin'izany fomba izany dia mampiroborobo ny saina isika.
Saribakoly misy sotro hazo
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana saribakoly mahafinaritra ho an'ny ankizy misy sotro hazo tranainy. Asa tanana tena manabe.
Fonony boky voaravaka
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba handravahana ny fonon'ny bokinao amin'ny lamba tsotra voaverina. Araka izany, dia hahagaga kokoa izy ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanazavanao ny zaridaina amin'ny natiora miaraka amina vilany mahafinaritra toa an'ity amin'ny endriny amin'ny jiro.
Tutorial DIY: rojo vakana Crystal
DIY amin'ny fomba fanamboarana rojo bib izay mampatsiahy ny rojo maxi izay tsy dia be loatra. Vita amin'ny vakana kristaly.
Akany ho an'ny haingon-trano
Haingo an-trano tsara foana ny akanim-borona, fa ny tena izy kosa tena mikorontana. Noho izany dia atolotray ho an'ny atitany ity iray ity.
Cushions misy lobaka
Tena antitra tokoa ny akanjo rehefa mandeha ny taona. Androany dia manararaotra azy isika amin'ny alàlan'ny fanaovana ondana mahafinaritra.
Latabatra baolina kitra
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana kilalao ho an'ny ankizy. Baolina latabatra nataon'izy ireo mba hanomezan'izy ireo lanja ny kilalao ary tiany toy izany.
Von-voninkazo misy tavoahangy sy paleta
Amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao hevitra mahafinaritra izahay amin'ny fanaovana rafitra lehibe ho an'ireo vilany. Araka izany, ny patio dia hijery maoderina sy tsara tarehy.
Tsoratadidy miaraka amin'ny fingotra eva
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana tsoratadidy mahafinaritra mba tsy hahavery ny kofehin'ny famakiana boky tianao indrindra.
DIY: trano indianina misy sivana kafe
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fananganana trano Indiana mahafinaritra miaraka amin'ny sivana kafe. Asa tanana lehibe hampiroborobo ny fandeferana eo amin'ny kolotsaina.
DIY: fonony maivana sigara
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana fonony azo ampiasaina ho an'ny jiro. Fitaovana hanovana ny maivana ho zavatra kanto.
DIY: rojo vato amoron-dranomasina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana rojo tsara tarehy misy vato avy any amoron-dranomasina. Asa tanana mahafinaritra ho an'ny fahavaratra.
DIY: fehin-tànana misy fingotra eva
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana fehin-tànana tsara tarehy sy tany am-boalohany amin'ny fingotra eva. Manokana ho an'ity fahavaratra ity.
DIY: siny fitaratra milahatra volon'ondry
Fitaovana ilaina ao an-dakozia ny siny fitaratra. Mampianatra anao handoko azy ireo amin'ny volon'ondry miloko samy hafa izahay anio.
Borosy madio madio
Amin'ity lahatsoratra ity dia ampahafantarinay anao ny vilany vy hanadio borosy ho an'ny asa tanana aorian'ny. Tsy hiondrika araka izany ny volombava.
Boaty misy boaty
Ny boaty kiraro dia zara raha azo ampiasaina indray ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​saingy anio dia asehonay fomba tsara hanodinana azy ireo hanao sary.
Fandriana saribakoly misy baoritra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny fandriana tsara ho an'ny saribakoly vita amin'ny baoritra. Amin'izany fomba izany, ny ankizy dia hanana ny fandriany voajanahary ho an'ny saribakoly.
Fomba fanamainana voninkazo amin'ny glycerine
DIY amin'ny fomba fanamainana voninkazo amin'ny glycerine ary hahatonga azy ireo ho tsara kokoa noho ny fanamainana mahazatra.
Kitapom-bola vita amin'ny lamba voaverina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana kitapom-batsy manintona miaraka amin'ny lamba fanodinana. Tsara ho an'ny tovovavy mitady kojakoja samihafa sy tsy dia misy.
Biby an-dranomasina misy taratasy fidiovana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny biby an-dranomasina mahafinaritra vita amin'ny taratasy fidiovana. Asa-tanana lehibe iray handaniana tolakandro miaraka amin'ireo ankizy.
DIY: Baolina tenisy amin'ny filantony
DIY amin'ny fomba fanamboarana hanger baolina tenisy. .
Pillow Pocket amin'ny fo
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fanaingoana manokana handravahana ireo ondana ao amin'ny efitranonay izahay. Apetraho am-paosy miafina izy ireo hahafahany mamela hafatra.
DIY: mandoko siny amin'ny mason miaraka amin'ny tady
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana haingon-trano amin'ny siny fitaratra feno fonosana tady an-dranomasina. Mba hanomezana fikitika hafa an-dakozia.
DIY: telefaona misy kaopy yaourt
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana kilalao mahafinaritra ho an'ny ankizy amin'ny alàlan'ny famerenana ny kaopy yaorta. Fomba iray hampianarana ny fanodinana amin'ny fomba mahafinaritra.
Lafaoro alika mafana avy amin'ny masoandro miaraka amina vilany pringles
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana lafaoro alika mafana mahomby nefa mahomby amin'ny amboaram-borona fotsiny. Famoronana vaovao sy mampiavaka.
Trondro misy lamba
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay trondro mahafinaritra misy sisan-damba. Asa tanana mahafinaritra azo atao amin'ireo ankizy kely ary harivariva.
Kitapo fandroana teknika amin'ny patchwork
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanamboarana kitapo makiazy tsara tarehy hanavaozana ny fitehirizana makiazy anao.
DIY: Ahoana ny fomba fanaovana voninkazo lamba
Fampianarana momba ny fomba fanaovana voninkazo lamba hanaovana brooches, kavina, rojo, handravaka kitapo, handravahana T-shirt, sns ...
Afovoany misy sakana amin'ny bosoa
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanodinana ireo bolongana tavoahangy mba hanaovana ivon-toerana tsara tarehy ho an'ny fotoana manokana.
Tompon'ny labozia misy vera yaourt vera
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao asa tanana milay be atao amin'ny ankizy. Mpihazona labozia sasany misy vera yaourt vera, fanodinana madio sy mafy.
Haingo haingon-trano amin'ny baoritra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana haingon-trano mahafinaritra amin'ny baoritra. Fitaovana haingon-trano tena haingo izay hahafahan'ny ankizy manao azy.
Soso-boasary vita amin'ny tanimanga polimer
DIY amin'ny fomba fanamboarana vakana amin'ny tanimanga polimer amin'ny endriny voasarimakirana nitafy tamin'ity fahavaratra ity.
DIY: Shawl tsara miaraka amin'ny taratasy moka
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana shawl tsara amin'ny taratasy mivalona. Asa tanana mahaliana ho an'ny ankizy.
Vorondolo mahatsikaiky miaraka amina taratasy cupcake
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanaovana vorondolo mahafinaritra amin'ny taratasy muffin, fomba iray hahafantarana ireo biby amin'ny alàlan'ny fanodinana fitaovana avy amin'ny manodidina ny trano.
Amboary ny dantelina na dantelina hanaovana rojo
DIY amin'ny fomba fampiasana dantelina na dantelina vita fanamboarana hanaovana firavaka am-pitiavana.
Voninkazo Origamizy handravahana ny tranonay
Fomba fanaovana voninkazo Origamière tsotra handravahana ireo zoron'ny tranonay amin'ny zavatra namboarina, tsara tarehy ary tsy mitovy.
Fanilo ara-drariny misy baoritra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana ny lantern Fair malaza. Fitaovana tsy manam-paharoa ho an'ny trano rantsankazo Andalaliana rehetra handravaka sy hanome fiainana.
DIY: fanomezana kominio amin'ny fingotra eva
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanaovana fanomezana ara-toekarena ny fiombonam-be. Saribakoly fingotra eva tena mora sy haingana hatao amin'ity vanim-potoanan'ny fiarahamonina ity.
Handravaka vato amin'ny loko
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fandaniana tolakandro mahafinaritra miaraka amin'ireo ankizy miloko vato misy loko. Tava mahatsikaiky sy mampivarahontsana.
Teny sy teny faneva vita amin'ny tariby alimo
Manamboara asa-tanana amin'ny fanaovana teny sy teny faneva amin'ny tariby alimo amin'ny alàlan'ny tweezers boribory ihany.
DIY: Ahoana ny fomba fanaovana voninkazo lamba amin'ny alàlan'ny fanodinana t-shirt
DiY amin'ny fomba fanaovana voninkazo amin'ny fanodinana akanjo avy amin'ny T-shirt taloha. Ho an'ity fampianarana ity dia ilaina ny manana fahalalana fototra momba ny zaitra.
Asehoy ny rojo vita amin'ny baoritra
DIY izay mampiseho ny fomba fanaovana ny rojo ataontsika mba hampisehoana tena ara-toekarena sy ao anatin'ny fotoana fohy.
Voninkazo miendrika saka
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana vilany mahafinaritra sy mampihomehy miendrika tarehy ny saka. Liana amin'ny trano.
DIY: brooch saribakoly Mantilla miaraka amin'ny fingotra eva
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanamboarana brooch tsara tarehy miaraka amin'ny rubber eva, mifandraika amin'ireo vehivavy manao mantilla amin'ny Paska.
DIY: Handravaka ravina sy voninkazo maina
DIY momba ny firavaka vanim-potoana fahavaratra lohataona. Ao no ahitantsika ny fomba handravahana voninkazo maina sy sampan-kazo maina.
DIY: Bunny paska misy horonan-taratasy
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanaovana zaza nahafinaritra Paska nahafinaritra mba hanao hetsika tsotra ho an'ny ankizy kely ao an-trano amin'ity Paska ity.
Herinandro Masina Hood
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana hood amin'ny Paska mahazatra. Tena mahafinaritra sy tsotra asa tanana ny ankizy hankalazana amin'ny fialan-tsasatra.
DIY: Ahoana no hanafoanana ny atody Paska?
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanafoanana ireo atody Paska mahazatra. Fomba tsotra sy mahafinaritra handaniana Paska mampiala voly amin'ny ankizy.
DIY: Ahoana ny fandokoana pataloha vita pirinty
DIY amin'ny fomba fandokoana kilaoty fohy vita amin'ny watermelon misy loko mafana. Mety amin'ny fahavaratra sy lohataona.
DIY: Ahoana ny fomba hanaovana peratra miendrika raozy
Diy amin'ny fomba fanamboarana peratra miendrika raozy amin'ny tanimanga polimerika homena amin'ny andron'i Sant Jordi.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana balaonina tsapa tsara tarehy handravahana ny efitran'ilay zaza. Finday tsara tarehy hilalao.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana akanjo vita amin'ny palitao tsara handaminana ny fehikibo. Ankehitriny dia hotehirizina amin'ny fomba tsara kokoa izy ireo mba haharetan'izy ireo maharitra.
DIY: sary hoso-doko manokana misy felam-boninkazo
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny boaty baoritra azo ampiharina vita amin'ny felam-boninkazo mba handravahana ny efitrano kely indrindra amin'ny trano.
Jiro haverina amin'ny baoritra atody
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanamboarana jiro valindrihana ho an'ny tranonay vita amin'ny baoritra atody. Fomba entina mitahiry kely.
Fetin'ny Fetin'ny ray: karatra miendrika akanjo
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia mamela anao asa-tanana mahafinaritra ho an'ny ankizy izahay amin'ny Fetin'ny ray. Amin'izay dia hanana fanomezana tsara ho an'ny ray aman-dreniny izy ireo.
Fanamboarana taratasy ho an'ny andron'ny ray
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny asa-tanana mahafinaritra misy horonan-taratasy ho an'ny Fetin'ny ray. Tsara ho an'ny zazakely homena ny dadany.
DIY: Fomba fanamboarana finday miaraka amin'ny crane origami
DIY amin'ny fomba fanaovana finday misy crane taratasy handravahana ny zoron'ny tranonay.
DIY ho an'ny ankizy, asa-tanana ho an'ny andron'ny Ray
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao asa-tanana tena mora ho an'ny ankizy toy ny zaza ho an'ny Fetin'ny ray. Loka ho an'ny raim-pianakaviana tsara indrindra misy kapsula kafe.
Famatorana fetin'ny ray, DIY ho an'ny ankizy
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana asa-tanana ho an'ny Fetin'ny ray. Famatorana tokana amin'ny fotoanan'ny ray miasa sy be fitiavana miaraka amin'ny zanany lahy.
Andron'ny fetin'ny ray: tanana mifatotra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao asa tanana tsotra ho an'ny ankizy amin'ny Andron'ny ray. Amin'ity andro ity dia hanome zavatra ny ray aman-dreniny izy ireo.
DIY: peratra midi vita amin'ny kofehy vita amin'ny tariby
DIY amin'ny fomba fanaovana peratra midi misy tariby aluminium.
DIY: Ahoana ny fomba fanaovana pendant miendrika ravina
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanaovana pendant ravina hazo amin'ny fampiasana tanimanga polymer, rojo volafotsy na tadin'ny hoditra ary peratra volafotsy.
Ahoana ny fomba hanaovana ny satro-boninahitra Princess Bubblegum
DIY amin'ny fomba fanaovana ny satro-boninahitr'i Princess Bubblegum - toetra amina andian-tsarimihetsika Adventure Time -, miaraka amin'ny sombin-javatra mamirapiratra.
Afovoany vita amin'ny bokotra miloko
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fananganana afovoany tsara misy bokotra miloko, hitondrana fifaliana ho an'ny tranonay miaraka amin'ny endrika haingon-trano.
Mpankafy Andalosiana ho an'ny Andalusia andro
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba ahafahanay manao asa-tanana amin'ny andron'ny Andalusia ao anatin'ny 5 minitra fotsiny. Mpankafy Andalosiana mahazatra.
DIY: Saino ho an'ny Andalusia
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana asa-tanana isan'andro amin'ny Andalusia. Ny saina maintso, fotsy ary maintso hanofahofa any am-pianarana.
DIY: satroka karnavaly, natokana ho an'ny ankizy kely ao an-trano
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana satroka karnavaly tsotra sy mahafinaritra. Ho an'ny ankizy kely dia miakanjo sy mifameno amin'ity kojakoja ity.
Fonosana fanomezana misy horonana taratasy fidiovana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanararaotana ireo horonana taratasy fidiovana amin'ny fanaovana fonosana fanomezana mahaliana. Tsara ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana.
Saron-tava karnavaly ho an'ny ankizy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana sarontava Carnival mahafinaritra ho an'ny ankizy. Amin'izany no ahafahantsika mankalaza io fialantsasatra io amin'ny fianakaviana.
Fiaramanidina misy paingotra akanjo sy tapa-kazo popsicle
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanaovana fiaramanidina mahafinaritra miaraka amin'ireo fitaovana voaodina toy ny paompy na hazo gilasy.
Anarana manokana miaraka amina eva rubber ho an'ny efitrano
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana ny anaran'ny zanakao lahy na zanakavavinao ho an'ny efitranony miaraka amin'ny fingotra eva.
Craft ho an'ny ankizy: Dove of Peace amin'ny baoritra baoritra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao asa tanana mora ho an'ny ankizy, ho an'ny Andron'ny fandriam-pahalemana, andro ankalazana ny tsy fanaovana herisetra amin'ny sekoly rehetra.
Castanets ho an'ny ankizy
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanaovana castanets an-trano mahaliana sy mahafinaritra ho an'ny ankizy, miaraka amin'ny baoritra sy satroka fisotro madio.
DIY: boaty firavaka manokana miaraka amin'ny boaty ferrero ho an'ny fetin'ny mpifankatia
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanodinana boaty sôkôla ferrero rocher, hanaovana boaty firavaka tsara tarehy manokana, indrindra amin'ny Andron'ny mpifankatia.
DIY: Ahoana ny fametahana poketra
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanamboarana kitapom-bola taloha amin'ny fehin-akanjo sy basy famehezana hafanana.
Mpizaha ny voasary makirana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana morontsiraka mahafinaritra amin'ny lamba tsapa. Ireo dia miendrika voankazo sy legioma, mety amin'ny lakozia.
Satroka trondro ho an'ny karnaval
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana satroka lehibe mahafinaritra ho an'ny karnavaly, mitovy amin'ny trondro lehibe avy any Cadiz, amin'ny maha-tany niavian'ny Karnavaly azy.
Box miaraka amina gilasy sy eva foam
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanaovana boaty manokana hitahirizana ireo firavaka kelinao. Miaraka amin'ny tehina gilasy sy siligaoma eva ihany, sarobidy !!.
Solomaso karnavaly mampihomehy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana solomaso karnavaly mahazatra. Fiantohana azo antoka ho an'ny ankizy.
Boaty sary misy baoritra
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hamerenany ilay fonosana fanomezana sisa tavela tamin'ny Three Kings Day, hanaovana boaty baoritra tsara tarehy.
Takelaka baoritra vita an-trano
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana boaty boaty tena mahafinaritra. Azonao atao ny mampiasa azy io mba hamonjy antontan-taratasy na ny asanao amin'ny tanana.
Kaontenera ho an'ny faran'ny taona voaloboka
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao fitoeran-javatra tsara ho an'ny voaloboka amin'ny faran'ny taona. Amin'izany fomba izany dia tsy ho very ny tenanao amin'ny fanisana ny isan'ny chime sisa.
Vatomamy misy tavoahangy plastika
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanamboarana zava-mamy mahafinaritra hametrahana eo ambony latabatra fidirana na raisina avy any an-trano, noho izany dia hitsena anao izahay.
Kitapo lamba ho an'ny fiantsenana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanamboarana kitapo fividianana entana tena tsara, noho izany dia tsy mila mitondra fonosana be dia be ao an-damosinao ianao.
DIY: Ahoana ny fomba filaharana kiraro avo
DIY amin'ny fomba fanodinana kiraro ary apetaho amin'ny velvet na astrakhan synthetic.
Baoty Santa Claus, mba hahafahanao mamela ny vatomamy amin'ny Krismasy
Amin'ity lahatsoratra ity dia mampianatra anao ny fomba hanaovana baoty Santa Claus mahafinaritra izahay, ka rehefa tonga ny Krismasy handao ny fanomezana dia avelany koa ny vatomamy.
Anjely misy kitay gilasy, sarobidy handravahana ny varavarankely
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana asa-tanana kanto. Anjely kely tena mamy vita amina hazo gilasy.
Baoritra firavaka baoritra misy loko maro loko, hitahiry ireo firavaka voalohany
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanamboarana firavaka kely kely sarobidy mba hahafahan'ny tovovavy manomboka manangona ny firavany voalohany: peratra, kavina ...
Snowman miaraka amina kaopy plastika azo ampiasaina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana snowman misy kaopy plastika.
Ny nahaterahan'i Betlehema vita amin'ny fitaovana samihafa
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ohatra vitsivitsy momba ny seha-pahaterahana nahaterahana ho an'ny Noely. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny misafidy ilay tianao indrindra apetraka ao an-trano.
Puss amin'ny saribakoly saribakoly
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana saribakoly mahafinaritra ny tantaran'ny ankizy 'Puss in Boots'. Araka izany, ampahafantarinay ny ankizy ny teatra sy ny famakiana.
Rakitra kiraro tany am-boalohany namboarinao
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fandaminana ny kiraronao rehetra amin'ny fehin-kiraro te hahafanta-javatra nataonao irery. Midira amin'ny DIY!
Amponga ho an'ny ankizy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana amponga sy lamba amponga. Kilalao tsara ho an'ny ankizy noforoninao, inona no fanomezana tsara kokoa noho ity.
Ahoana ny fomba fanaovana bokotra amin'ny tanimanga polymer (FIMO)
Lahatsoratra DIY manazava ny fomba fanaovana bokotra amin'ny tanimanga polymer (FIMO). Ao anatiny dia hazavaina ny karazana bokotra sy ny fomba fanaovana azy.
Akanjo mahatsikaiky handravahana ny peninao
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manampy anao handravaka ny penina tianao amin'ny famolavolana landy eva. Ianao no voalohany amin'ny kilasy.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana cushion tena kuki mandritra ny Andron'ny mpifankatia. Voaravaka am-po, dia ho manokana ho an'ny namanao izany.
Haingon-trano miaraka amin'ny fingotra eva
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanararaotana ny zana-kazo taloha amin'ny fingotra eva. Amin'izany fomba izany, homentsika fifandraisana mahafinaritra sy ankizy ary hatrany am-boalohany izy.
Karipetra vita amin'ny t-shirt taloha
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana rug ho an'ny haingon-trano ho an'ny zanakao, vita amin'ny T-shirt taloha.
Mpamosavy baoritra ho an'ny Halloween
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanaovana mpamosavy Halloween amin'ny baoritra, mba hahafahanao mametraka azy eo am-baravaran'ny trano ho haingon-trano.
Doraemon keychain vita amin'ny FIMO
Lahatsoratra momba ny fomba fanaovana keychain an'ny sariitatra tantara an-tsary Doraemon. Ao anaty tanimanga polimer (Fimo na Sculpey) tanteraka izy io.
Beanbags manokana, mahasahy manamboatra seza anao manokana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana kitapo mahafinaritra. Toerana tena ahazoana aina rehefa tonga ny mpitsidika na ny namana. Mahazo aina ary nataonao.
Boaty hazo voaravaka
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba handravahana ireo boaty hazo tsotra anao hanomezana azy ny endrikao manokana sy sarobidy.
DIY: fehin-tànana tantsambo vita amin'ny tady
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanamboarana fehin-tànana tantsambo vita amin'ny kofehin-kiraro sy kitrokely vy. Tena mora ny manao.
DIY: Amboary amin'ny loko vita amin'ny lamba ny pataloha jeans
Lahatsoratra DIY manazava ny fomba fanamboarana jeans amin'ny alàlan'ny loko vita amin'ny lamba, borosy, bobongolo tanimanga polymer na modely baoritra
Ombivavy haingon-trano miaraka amin'ny pulp taratasy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao omby mahafinaritra sasany handravahana ny efitranon'ny zanakao na amin'ny zoron'ny trano.
Jiro misy bobongolo muffin
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana jiro valin-drihana lehibe voaravaka na vita amin'ny lasitra taratasy muffin.
Famantaranandro miaraka amin'ny magazine dokam-barotra, fanodinana taratasy
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana famantaranandro tsara tarehy mba hahafahanao manamarika ny ora. Amin'ny alàlan'ny fanodinana ireo takelaka magazine dia afaka manao zavatra toa an'io isika.
Jiro boribory vita amin'ny vera vaky
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanararaotana ny vera vaky, fanaovana jiro boribory tsara tarehy ho an'ny trano.
Vato amoron-dranomasina voaravaka
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra hevitra sasantsasany izahay mba hahafahanao handravaka ireo vato na akorandriaka alain'ny ankizy avy eny amoron-dranomasina.
Biby misy plastika sy masomboly
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba hanaovana biby mampihomehy misy plastika sy masomboly, mba hahafahan'ny ankizy miala amin'ny fomba hafa.
Voninkazo taratasy sokafy
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana voninkazo taratasy misokatra amin'ny fomba tena tsotra, handravahana antoko rehetra amin'ity fahavaratra ity.
Jiro taratasy sinoa handravahana ny efitrano
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay asa-tanana handravaka ny efitranonao, jiro taratasy sinoa hanome azy rivo-piainana tatsinanana.
Raozy tsotra misy taratasy, tsara haingo
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manome hevitra anao handravahana ireo fanomezana, ireo raozy tsotra vita amin'ny sombin-taratasy na baoritra fotsiny.
Saribakoly vita amin'ny foami na eva, manokana ho an'ny zazavavy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana saribakoly amin'ny eva na foam rubber. Hetsika mahafinaritra hatao amin'ny ankizy.
Kitara gitara, hametrahana ny toe-tsaina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana gitara baoritra mahafinaritra tokoa, amin'izay ny zaza dia afaka miala voly mody milaza fa mivoaka avy amin'ny gitara ny mozika.
Seza vita amin'ny barika divay
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra asa tanana mahafinaritra be izahay. Avadiho ho toy ny seza ho an'ny trano ny barika divay taloha.
Fiara misy horonan-taratasy, mahafinaritra ny mampiala kely ilay kely
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana fiara mihazakazaka miaraka amina taratasy vitsivitsy misy horonana.
Manova ny lambam-pandriana noforoninao
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana fonony ho an'ny latabatra fanovana zazakely. Amin'izany fomba izany dia hahatsapa ho mafana sy voaro kokoa ianao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana saka mahatsikaiky vita amin'ny ba kiraro ho an'ny zanak'akano kely ao an-trano.
Resety lakaoly vita an-trano
Ny fananana lakaoly dia tena ilaina amin'ny fanaovana asa-tanantsika, koa androany dia lazainay aminao ny fomba fanaovana lakaoly namboarina sy namboarina tamin'ny tontolo iainana.
Kilalao voaverina: Ny sodina majika!
Ny fanaovana kilalao recycled dia fomba mahafinaritra indrindra fanaovana asa tanana amin'ny ankizy. Androany manomboka amin'ny Crafts on dia lazainay aminao ny fomba fanaovana sodina.
Asa-tanana ho an'ny ankizy: Ny oroka manidina
Ny fanaovana asa-tanana amin'ny ankizy dia mahafinaritra be foana, izany no antony avy amin'ny Crafts On dia manoro hevitra anao izahay mba hanaovanao an'io magnet fridge io miaraka amin'izy ireo.
Asa-tanana ho an'ny ankizy: Sarontava Piggy
Ny asa-tanana dia fomba mahafinaritra tokoa hiarahana amin'ny ankizy. Avy amin'ny Crafts On izahay dia milaza aminao ny fomba fanaovana taratasy mora foana.
Tombo-kase misy satroka plastika sy eva
Tombo-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny vita amin'ny hazo
Tombo-kase miaraka amin'ny famafana
Hazo Cherry misy ravina sela
Vakinankaratra tsy misy tohana ho an'ny ankizy
Ladybug pom poms
Ny koala vy
Jiro misy kristaly opaque
Mozika lolo miaraka amina baoritra miloko
Fomba haingo: toro-hevitra hahatonga ny asa-tananao hiavaka
Hevitra azo ampiharina sasany handravahana ny asa-tananao amin'ny fomba tany am-boalohany. Mety amin'ny fanomezana fanomezana natokana ho an'ny olon-tianao.
Farafara saribakoly vita amin'ny boaty voankazo
Vilany voaravaka hodi-kazo
Andininy miaraka amin'ny hodi-kazo
Finday na ridao
Afisy ho an'ny zaridaina
Jiro alina amin'ny kintana
Saron-tànana sy fonon-tanana lava avy amin'ny akanjo baoty 1
Satroka sy fonon-tànana lava avy amin'ny akanjo baoty cashmere
Saron-saka saka Halloween amin'ny taratasy mache
Volavola saka sary mache taratasy taratasy
Saron-tava tanimanga vita amin'ny tanimanga sy taratasy
Saka lava tongotra amin'ny taratasy mache
Kiraro mache taratasy
Pendant miaraka amina biriky biriky divay
Pendant marina vita amin'ny takona bosoa amin'ny lovia volafotsy misy firavaka sy rojo.
Tompon'ny napkin vita amin'ny bosoa
Mpihazona napkin tsara tarehy vita amin'ny biriky bosoa divay.
Handravaka ny fitoeran'ny kapoaka fandroana
Hevitra asa tanana azo ampiharina hanamboarana haingo ny kapoaka fandroana ary hanomezana endrika tsara tarehy kokoa izy.
Ireo mpitaingin-tsoavaly vita amin'ny biriky biriky amin'ny taila
Coaster tsara tarehy vita amin'ny corks amin'ny tile.
Ireo mpitaingin-tsoavaly misy sakam-boaloboka mandainga
Ireo mpitaingin-tsoavaly misy sakana
Sora-baventy misy boaty divay
Haingo Krismasy miaraka amina divay divay 2
Haingo Krismasy miaraka amina divay divay
Divay misy labiera avy amin'i Steven Leslie
Ampiasao ny mpanamory bosoa divay
Hazo amandy voninkazo
Mamorona sarontava panda bear anao manokana
Manaova sary koala aostralianina
Mamorona diary valizy manokana
Asa tanana ankizy: collage